राखी सावन्तको विवाहका बारेमा राखीका भाई राकेशले खुलाए रहस्य, कहाँ छन् राखीका श्रीमान् रितेश - Prateek Nepal
January 11, 2021 Ramash kunwar
एजेन्सी / बलिउड नायीका राखी सावंतको विवाहित जीवन एक पटक फेरि चर्चामा छ । राखी आफ्ना पति रितेशको पर्खाइमा छन् । किनकि उनी विश्वलाई विश्वस्त पार्न चाहान्छिन् कि उनी वास्तवमै विवाहित हुन्। राखी आफ्ना पति रितेश मिडियामा आएर उनलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरुन् भन्ने चाहान्छिन्।
राखी अहिले रियालिटि शो विगबसमा छन् । उनले शो मा आफ्ना श्रीमान् का बारेमा पनि केही कुरा राखेकी थिइन् । विवाह भएकै दिन आफुलाई होटलमा छोडेर श्रीमान् हिडेको कुरा उनले बताएकी थिइन् । विवाहकै दिन मिडियाले घर घेरेपछि रितेश रिसाएर हिडेका थिए । उनी मिडियामा आउन चाहन्नन् । तर राखीका भाइका अनुसार राखीको काम प्रति उनका भिनाजुलाई कुनै आ’पत्ती छैन ।
लाइसेन्सको लिखित र ट्रायल दुबै परीक्षा स्थगित
Breaking – लाखौ पुगेको सुनको मुल्य, आज सोच्नै नसकिने गरि घट्यो !
September 26, 2020 September 26, 2020 Ramash kunwar
को’रोना भाइ’रस लागेर २ दिनमै निको हुने पहिलो व्यक्ति भए ट्रम्प, अस्पतालबाट निस्किएर शुरुमै पुगे समर्थकहरूमाझ
October 5, 2020 October 5, 2020 Ramash kunwar
कुलमान घिसिङलाइ हटाउन पैसाको बिटो बोकेर रातारात मन्त्रालय धाउने को हुन् ? नामै तोकेर खोले यस्तो र’हस्य पुण्य गौतमले